Home Wararka Maxaa ka soo baxay kulankii RW Rooble & beesha Habargedir? (Warbixin)
Maxaa ka soo baxay kulankii RW Rooble & beesha Habargedir? (Warbixin)
Waxaa magalaada Dhusamareeb ka dhacay kulan balaaran oo qarsoodi ah oo albaabada u xirnaa. Kulankaan oo ay soo qaban qaabiyeen waxgaradka iyo ganacsatada ka soo jeeda beesha Habargedir ayaa ahaa mid looga hadlayay danaha beesha Habargedir iyo geedi socodka Siyaasada dalka iyo doorka beesha ku leedahay.
Kulankaan oo uu goobjoog ka ahaa Axmad Qoor Qoor ayaa inta uusan bilaaban waxaa dadkii ka soo qaybgalay loo sheegay in ay taleefanada banaanka iska dhigaan, waxa kaloo la isla gartay in aan marnaba cidna lala wadaaagin qabsoomida kulanaan iyo talooyinka ka soo baxay.
Waxgaradka Beesha Habargedir oo hadalka ku bilaabay soo dhaweyn iyo sida ay beesha maqsuud ugu tahay in ay xiligaan kala guurka ah ay hesho hogaanka siyaasada dalka iyada oo mudo labaatan sano ku dhawaad ah aanay helin fursad ay ku hogaamiso dalka Soomaaliya.
Qaar kamida odoyaasha ka soo qayb galay kulanka ayaa eed dusha kala dhacay Rooble iyada oo u sheegay in uu haysto fursad dahabi ah oo uu beesha sharafkeeda kor ugu qaado karo laakiin uu hada u muuqdo qof laciif ah oo aan lahayn aragti siyaasadeed kana ooman geesinimadii lagu yaqiinay beesha Habargedir.
“Ra’iisal Wasaare aanba kula kaftamee, mar-marka qaar caadifo ayaa i qaada marka aan arko adiga oo tusbax yar wato oo u muuqda oday Soomaaliyeed oo miskiin ah… waxaana mararka qaar is-iraahdaa halkeey ka baxday raganimadii Habargedir ee ku salaysanayd qobka, islaweyniga iyo awood sheegashada.. waxaad noqotay wadaad tusbax hayso oo aanba ka muuqan awood” sidaas waxa yiri mid kamid dadkii ka soo qayb-galay kulanka.
Mid kale oo kulanka joogay ayaa isana ku daray “Ra’iisal Wasaare Khaadka waxa waligeed ka ganacsan jiray beesha Habaygedir gaar ahaan beesha Sacad, waxaan mudo ku dhow sanad kaa codsanaynay in aad qaadka noo furto hadana wali waxa kaama hayano.”
Kulanka oo dhowr saacadood socday ayaa waxaa looga hadalay xaalada Galmudug iyo qaabkii beesha ugu nagaan lahayd kursiga hadana ay haysato, iala markaana u hanaan lahayd kursiga weyn ee madaxweynaha. Waxaa loo sheegay RW Rooble in mustaqabalka siyaasadda ee beesha Habargedir ay ku xiran tahay sida uu u muujiyo awoodiisa siyaasadeed.
Rooble oo isna hadalka qaatay ayaa ka waramay dhibka uu ka soo maray in uu u dulqaato waxa uu ku sheegay hagardaamada Madaxweyne Farmaajo. Waxa uuna sheegay in waqti badan ka galay in uu la dhaqmo Farmaajo, isaga oo aan muujiin dagaal siyaasadeed.
“Dhibka aan ka soo maray ninkaa Farmaajo la yiraahdo ma doonayo in aan caawa halkaan ku fur-furo, laakiin waxa aan isku dayay in la dagaalo, xaqiiqdiina meel ayaan saaray, laakiin waxa aan ogaaday in ninkaan uu dabada kula jiro wadamo oo ayan sahlanaynin in aan la dagaalo. Waxaan taa ka sii daran waxaa jira mucaaad wareersan oo ay u horeeyaan kuwa ka soo jeeda beesha Habargedir oo doonaya in ay kursigeyga ku fariistaan”. Ayuu yiri RW Rooble
Waxa uu intaas ku daray “Bacadal shida watacab, aniga ninkaa (Farmaajo) lama heshiinin laakiin waxa aan go’aansaday in aan wada noolaano ama wada joogno inta ka hartay xilgaarsiinta! Koleey idinkana igula talin maysaan in aan noqdo sidii ragii horay u soo fashilmay oo ay ku jiraan RW Cabdiwali Shiikh iyo RW Saacid kuwaas oo meel cidla ku soo dhamaaday” .
Rooble ayaa ugu bishaareeyay beesha Habargedir in uu ku guulaystay in Khaadkii Kenya dib loo furayo taas oo beesha Habagerdir, gaar ahaan beesh Sacad ay dib u hanan doonaan ilihii dhaqaalaha ee horay looga xiray.
“Waxaan idinkuugu bishaaraynayaa in qaadkii dib loo furayo maalmaha ama asbuucyada soo socda.. sida aan horay ugu sheegay raga qaar ee caawa halkaan nala fadhiya, nin waalan ayaa ilaah wax noogu daray ee dulqaata ayaan idinku ku iri,… soo idinkama saxnaynin… hada Farmaajo oo aan raali ka ahayn ayaan Khaadkii idin furay…..” Ayuu raaciyaya RW Rooble.
Kulanka waxaa sidoo kale looga hadalay shaqaaleynta dhalinta beesha Habargedir iyo in loo dhiibo ilo muhim ah. Wasiir ku Xigeenka Wasaaradda Warfaafinta Al Cadaala oo kulanka xiriiriye ka ahaa ayaa yiri “koleey war idinkuma seegana, waxaanse idiin sheegayaa in rag muhim ah oo ka soo jeeda beesha Habargdir uu RW Rooble u magacaabay ilo muhim ah sida dekada iyo hay’adda jinsiyadaha.. taasna waa guul mudan in loogu mahadceliyo RW Rooble”.
Qoor Qoor oo inta badan aamusnaa ayaa dhankiisa sheegay in ay muhim tahay in isaga iyo Rooble looga danbeeyo arimaha siyaasada Beesha Habargedir, isaga oo sheegay in guulo badan soo socdaan.
“waad ogtihiin rag baa aniga iyo Rooble nagula dagaalay maxaad Farmaajo ula heshiiseen, laakiin waxa aysan ogaynin in hadii aanan Farmaajo lala heshiin lahaynin aan jagada Ra’iisal wasaaraha aanan heli lahaynin, isaga oo diyaar u ah in uu Beesha Abgaal siiyo ayaan ku qanciyay in uu Habagadir siiyo, gaar ahaan walalaha Sacad oo masraxa siyaada mudo dheer ka maqnaa., taasna waan ku guulaysanay” ayuu yiri Qoor Qoor
Waxa uu raaciyay “ Walaalayaaloow waxa aan sameynayno (Qoor Qoor iyo Rooble) waan ognahay, wadada aan qaadaynana waa ay inoo cadahay, siyaasadda anaga noo dhaafa.. anaga ayaa kursigii 20 sano maqnaa soo dhicinay , anaga ayaana hayna qorshihii lagu sii heysan lahaa”.
Qoor Qoor oo ka jawaabaya su’aal la xiriirta cadaalad darada beesha Habargdur ay ka tisanayso degaanka hoos yimaada dowlada Goboleedka Koonfur Galbeed gaar ahaan degaanka Shabeelada Hoose ayaa sheegayin ay arintaas kala hadleen MW Lafta Gareen hadana loo balan-sanyahay si beesha qaybteeda uga hesho hogaanka deegaanada hoos yimaada Gobolka Shabeelada Hoose.
Gaba-gabadii kulanka waxaa la isla gartay in la kordhiyo gudigii beesha Habargedir ee ka koobnaa 6da qofood ee la shaqeeynaysay RW Rooble laguna soo daro dhowr qofood oo kale, gaar ahaan in lagu soo daro qof ka jeeda beesha Saruur oo aan wakiil ku lahayn gudiga beesh Habargedir ee la talisa RW Rooble.